Shiinaha Gaarka ah Isticmaalka Mashiinka Jetka ee dareeraha-sariirta ah Qalabka adag ee adag iyo soosaarayaasha | Qiangdi
U isticmaal waxyaabo gaar ah qaybo ka mid ah alaabada xiriirka si aad u qanciso shuruudaha kala-soocidda alaabada adag.
Wheel Taayirrada kala-saarida dhoobada dhoobada ah ee loo yaqaan 'Ceramic or SiO or Carborundum' si ay ugu haboonaato badeecado adag oo kala duwan oo adkaantoodu ka sarreyso birta.
Ku dhajinta xaashida dhoobada ee gidaarka gudaha ee Jet mill.
Ku dhajinta PU ama dhoobada kala-sooca duufaanka kala sooca iyo alaab aruuriyaha.
Nidaamka wax shiidaya jetku wuxuu ka kooban yahay matoor jet, duufaan, shaandhada boorsada iyo taageere qabyo ah. Hawo la sifeeyay, la suuxiyay oo la cadaadiyey ayaa la galiyay qolka shiidaya iyada oo loo marayo mashiinka hawada, maaddada ayaa midba midka kale ku jajabayaa isku dhafka afar qulqulka hawada ee cadaadiska sare leh ugu dambeyntiina waa la jajabiyay. Kadib, maaddada waxaa loo kala saari doonaa cabbirro kala duwan oo hoos imanaya xoogga bartamaha iyo xoogga bartamaha. Qaybaha ganaaxa ee uqalma waxaa ururiya duufaanta iyo shaandhada boorsada, halka walxaha waaweyn ay dib loogu celin doono qolka shiidi doona si dib loogu celiyo.
Xusuusin: Isticmaalka hawada la cadaadiyey laga bilaabo 2 m3 / min ilaa 40 m3 / min. Awoodda wax soo saarku waxay kuxirantahay jilayaasha gaarka ah ee maaddadaada, waxaana lagu tijaabin karaa saldhigyadeena imtixaanka. Xogta awoodda wax soo saar iyo ganaaxa waxsoosaarka ee ku yaal xaashidan ayaa loogu talagalay oo keliya tixraacaaga. Qalabyada kala duwan waxay leeyihiin astaamo kala duwan, ka dibna hal nooc oo ka mid ah qalabka wax lagu duubo ayaa siin doona wax soo saar kala duwan oo loogu talagalay waxyaabo kala duwan. Fadlan ila soo xiriir aniga oo ah talo soo jeedin farsamo oo ku habboon ama tijaabooyin alaabtaada ah.
1.Precision dhoobada dhoobada, dahaarka ka hortagga duugga ah ee ka soo baxa habka kala soocida walxaha si loo hubiyo nadiifnimada alaabada. Gaar ahaan ku habboon alaabada adag ee adag, sida WC, SiC, SiN, SiO2 iyo wixii la mid ah.
3.Dhacdo: Dhoobada ama SiO ama Carborundum dahaarka loo adeegsaday qalabka leh Mohs Hardness Fasalka 5 ~ 9. Saamaynta qodista waxay ku lug leedahay oo keliya saameynta iyo isku dhaca miraha dhexdooda halkii ay ku dhici lahayd isku dhaca darbiga. hubinta taabasho la aanta birta inta shiidansa oo dhan daahirnimada ugu dambeysa.
4. Xawaaraha gawaarida waxaa xakameynaya beddelaha, cabbirka walxaha si xor ah ayaa loo hagaajin karaa. Shaandheynta kala-soocida ayaa si toos ah u kala soocaysa maaddada si toos ah u socota si ay si hufan u xakameyso nacnaca alaabooyinka la dhammeeyay. Badeecada budada Ultrafine waa mid deggan oo lagu kalsoonaan karo.
- Habka kormeerka, xakamaynta iyo otomaatiga
- Horumarinta softiweerka iyo barnaamijka codsiga waqtiga dhabta ah
- Rakibaadda iyo tijaabinta qalabka iyo nidaamyada xakamaynta
- Mashiinka iyo hawlgelinta dhirta
- Taageero inta lagu jiro wax soo saarka
- Jaangooyada iyo qorshaynta kheyraadka
- Xalka Turnkey, hagaajinta dhirta iyo xalka casriyeynta
- Ka faa'iideysiga aqoonta laga helay boqolaal codsi oo ka jira warshado kasta
- Ka faa'iideysiga khibradda injineeradayada khibradda leh iyo wada-hawlgalayaashayada
Hore: Nooca caanka ah ee lagu nadiifiyo-sariirta Jet Mill
Xiga: Qalabka Adag ee Sare Jet Mill